Ka 25, 2018 admin
Mike Novogratz: US Gov nchoputa n'ime Bitcoin bụ a ezi ihe
Billionaire ọṅụ Mike Novogratz kwuru na ya bụ adịghị anya site boro na-anabata nchoputa, a mmetụta kwughachiri Cameron Winklevoss, president nke kaadị mgbanwe Gemini. Wall Street nnukwu Bitcoin ehi ja aga dị ka mmalite nke dị mkpa usoro iwu nlekọta.
"Weeding si ọjọọ eme ihe nkiri bụ a ezi ihe, bụghị a ihe ọjọọ maka ahụ ike nke ndị ahịa,"Novogratz, onye na-mwube cryptocurrency ahịa akụ Galaxy Digital LP, kwuru N'ajụjụ ọnụ. "Ụbara mgbanwe nwere ndị a ebu ibu nọmba ike ụfọdụ echiche nke obi ụtọ na gburugburu ego,"Ka o kwuru, ehota ahụmahụ ya onwe ya na-agbalị ahia.
"Anyị n'anabata ọ bụla ase na-eje ozi azụlite iwu dabeere ahịa na-igbochi ọjọọ eme ihe nkiri,"Winklevoss, president nke Gemini exchange, kwuru na nkwupụta.
Kraken goro Bush ochichi ikpe dị ka n'ozuzu ndụmọdụ
San Francisco dabeere cryptocurrency mgbanwe Kraken egowo a mbụ gọọmenti etiti ikpe họpụtara President George W. Bush na-eje ozi dị ka ya n'ozuzu ndụmọdụ.
Business Insider na-akọ na na mgbanwe, asatọ-kasị ibu n'ụwa na a kwa ụbọchị olu nke dị n'okpuru $350 nde, egowo Mary Beth Buchanan, nwaanyị mbụ na-ntà-ebi onye họpụtara US Attorney maka Western District of Pennsylvania.
20% nke ego oru atụle kaadị trading ọrụ na 2018 dị ka Reuters nnyocha e mere
Ontario dabeere ego ozi ike Thomson Reuters tọhapụrụ nnyocha e mere na-arụpụta na-egosi na-eto eto nwere mmasị na cryptocurrency ahịa.
Thomson Reuters e nyochara 400+ ahịa na chọpụtara na otu-na-ise nke ha na-eme atụmatụ na-enye cryptocurrency trading ọrụ na-esote 12 ọnwa, ruru ka a dị ịrịba ama na-abawanye na ọnụ ọgụgụ nke ndị na-arịọ si ahịa, nke bụ "isi mgbanwe."
Mmanụ 'Constrium nwalere blockchain dabeere na usoro iji dochie akwụkwọ ndekọ Idebe
A gazuo uwa niile, oké osimiri tank ...
rebajas pronovias kwuru:
June 10, 2018 na 1:25 PM
ekele! Good post!